Turkcell 25 ။ ကျင်းပသည့်နှစ် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီTurkcell 25 ။ အောင်ပွဲခံ
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, Advertising ကြော်ငြာ (Advertorial), တူရကီ 0
စတင်ဖွဲ့စည်း, 25 နှစ်ပေါင်း, နည်းပညာအဖြစ်တူရကီရဲ့ unremitting အားထုတ်မှုတစ်ဦးဦးဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်ဆက်လက်ကတည်းကနှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ရပ်များ၏ Turkcell xnumx'inc နယ်ပယ်တူရကီ, မြို့တော်အတွက်အထူးဧည့်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan နှင့်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာ ၀ န်ကြီး Bekir Pakdemirli တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။
Turkcell ရဲ့ 25 ယခုနှစ် reception ည့်ခံပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Mehmet Cahit Turhan ကလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်လေးပုံတပုံကတည်ထောင်ခဲ့သော Turkcell သည်တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံးဂျီအက်စ်အမ်အော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မျှဝေခြင်းနှင့်ရယူသုံးစွဲခြင်းတို့၏အမြန်နှုန်းသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်တိုက်ခိုက်မှုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဤအမိန့်သစ်ကိုလိုက်နာရန်နည်းလမ်းမှာသတင်းအချက်အလက်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများရရှိခဲ့ပြီးဤတိုးတက်မှုများကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္aသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာသည်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ Turkcell ပဲ။
စည်းမျဉ်းကဏ္ဍများအတွက်လမ်းခင်း Turhan သူတို့မထွက်ရအင်တာနက်, အကောင်အထည်ဖော်ကျနော်တို့ပူးတွဲအခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ်တစ်ဦး protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုမီတူရကီ "ဟုမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်မှာအလွန်အရေးပါအမှတ်သို့ရောက်ရှိကြောင်းအလေးပေးခဲ့ဟုဆိုသည်။ မဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အော်ပရေတာများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အထူးသဖြင့်မြို့တွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများ၌ကြုံတွေ့ရသောပြtheနာများကိုဖယ်ရှားပေးမည့်ဥပဒေတစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ”
၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီး Turhan ကပြောကြားရာတွင် Turkcell Turkcell သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းသည်လည်းအရေးကြီးသောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ငါတို့တိုင်းပြည်သာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Turkcell ရဲ့ 25 နှစ်ကိုငါဆင်နွှဲသည်။
Kartalkaya Turkcell အတွက်ပလက်တီနမ်လိုင်းခွင့်ထူး 15 / 01 / 2016 Kartalkaya သုံးစွဲသူများအတွက် Turkcell ပလက်တီနမ်အခွင့်ထူးများ။
Turkcell ထံမှဆက်သွယ်ရေး၏စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းကြောင်းများပေါ်တွင် အခြေခံ. Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်း 13 / 09 / 2014 Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းတွင် Turkcell မှအဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှု - Eurasia Tunnel Project kapsama လို့လူသိများတဲ့ Istanbul ရေလက်ကြားအဝေးပြေးလမ်းဖြတ်ကူးဖောက်ခြင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Turkcell မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးမြေအောက်ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး Turkcell ဆောက်လုပ်ရေးပေးထား 08 / 12 / 2016 ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး Turkcell ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကူညီပေးခဲ့သည်: အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ကျောင်းသားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းတူရကီနှင့်ဥရောပအာရှ, Turkcell ၏မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကိုပေး '' အင်တင်နာကိုပြောင်းရွှေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ Turkcell အင်ဂျင်နီယာ Mehmet Yalkınမှစီမံကိန်းအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသော…
Turkcell နှင့်အတူ Huawei` ဌာနေနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး 16 / 05 / 2017 Huawei နှင့် Turkcell, Turkcell နှင့် Huawei နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, တူရကီအတွက်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပူးတွဲ R & D လှုပ်ရှားမှုများပြင်းထန်လာဖို့ရည်မှန်းချက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့်အတူ, ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ် 5G နည်းပညာများပိုမိုနက်ရှိုင်းရန် ...
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Turkcell Metro ကအင်တာနက်ခေတ်စတင် 07 / 07 / 2018 Turkcell ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Kaan Terzioğluကပြောကြားသည်မှာ Turkcell ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Turkcell ၏ LTE အခြေခံအဆောက်အအုံမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Turkcell သုံးစွဲသူများသည် Dergilik application မှ TV + နှင့် TV + ကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်မှသီချင်းများကိုနားထောင်နိုင်လိမ့်မည်။
Kartalkaya Turkcell အတွက်ပလက်တီနမ်လိုင်းခွင့်ထူး
Turkcell ထံမှဆက်သွယ်ရေး၏စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းကြောင်းများပေါ်တွင် အခြေခံ. Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်း
ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး Turkcell ဆောက်လုပ်ရေးပေးထား
Turkcell နှင့်အတူ Huawei` ဌာနေနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Turkcell Metro ကအင်တာနက်ခေတ်စတင်